Brent နှင့် WTI: ခြားနားချက်တွေက ဘာတွေလဲ
ရေနံဈေးကွက်အကြောင်း ဖတ်ရ(သို့) ကြားရသည့်အခါ၊ နားလည်ရန်ခက်သော စကားနှစ်လုံးနဲ့ကြုံရမှာပါ: Brent နှင့် WTI (အနောက်တက္ကဆက် အလယ်အလတ်)။ ယင်းတို့သည် အဓိက ရေနံ ရည်ညွှန်းအမှတ်နှစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယင်းတို့ကြားက ကွဲပြားခြားနားမှုဟာဘာလဲ နှင့် ဘာလို့မတူတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိရတာလဲဆိုတာ သိပါသလား?
Brent နှင့် WTI အပေါ်တွင် အမြတ်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာ သင်သိရန်လိုအပ်သည့် ယင်းတို့အကြောင်း အရေးအကြီးဆုံး သတင်းအချက်အလက်ကို စုစည်းပေးထားပါသည်။
အခြေခံကစလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရေနံအမှတ်များနှင့် အမျိုးအစား အများကြီးရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေနံအမှတ် သုံးခုမျှသာ ရေနံ ရည်ညွှန်းအမှတ်ဖြစ်လာပါသည်။ ယင်းတို့မှာ Brent, WTI နှင့် Dubai Crude တို့ဖြစ်သည်။ Brentနှင့် WTI အကြောင်းပြောကြရအောင်။ သူတို့သည် ဓာတ်ဆီသန့်ရာတွင် စံပြအဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုခံရဆုံးဖြစ်သည်။
OPEC ( ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံတင်ပို့သည့်အဖွဲ့အစည်း) မှ ရောင်းဝယ်သူ၏ စိတ်အလိုအရပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် ဈေးနှုန်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည့် ၁၉၈၀ခုနှစ် အကုန်လောက်တွင် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သည့် ဈေးနှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ရန်၊ တင်ပို့သူများသည် orienting (အရှေ့တိုင်း) အမှတ်လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။ Brentနှင့် WTIတို့သည် ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ရေနံထုတ်လုပ်သူတိုင်းသည် ရည်ညွှန်းအမှတ်နဲ့ ဘယ်လောက် အပေးအယူမျှလဲပေါ်မူတည်ပြီး သူထုတ်လုပ်နေသော ရေနံအတွက် ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်ကြပါသည်။
Brent (သို့) WITသည် ရေနံအမှတ်များထဲက တစ်ခုမျှသာလို့သင်ထင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မှားပါလိမ့်မည်! သူတို့သည် တူညီတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့် မတူညီတဲ့အမှတ်များအတွက် ဘုံအမည်သာဖြစ်ပါသည်။
ပထမတစ်ခုသည် တည်နေရာဖြစ်သည်။Brent သည် ဥရောပနှင့် အာရှဈေးကွက်အတွက် စံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရည်ညွှန်းအမှတ်သည် Brent, Ekofisk, Oseberg, နှင့် Forties ၏ နော်ဝိန်းဂျီးယမ်းနှင့် စကော့တလန် ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း လုပ်ကွက်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် ရေနံအမှတ်များ ၁၅ခုထက်မက ပါဝင်ပါသည်။
WTIသည် အနောက်တိုင်းစက်ဝိုင်းခြမ်း၏ အမှတ်ဖြစ်သည်။ WTI သည် အမေရိကန် ရေနံနယ်ပယ်များ၊ အထူးသဖြင့် တက္ကဆက်၊ လူဝစ်စီယားနားနှင့် မြောက်ဒါကိုတာတို့မှ ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဝိသေသလက္ခဏာသည် ဓာတုဖော်မြူလာဖြစ်သည်။ပထမဦးစွာ၊ တူညီတဲ့ ရေနံအမှတ်များ လုံးဝနီးပါးမရှိဘူးဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ Brent နှင့် WTI ပါဝင်သည့် အမှတ်များသည်ပင် မတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိကြသည်။
Brent သည် ပေါ့ပါးသည့် အနိမ့်-ဆာလဖာ ရေနံအမျိုးစားဖြစ်သည်။ WTIသည် သိပ်သည်းသည့် ရေနံမှတ်ဖြစ်သည်။ WIT၏ အရည်အသွေးသည် Brentထက် ပိုမြင့်မားပါသည်။
ဘာကြောင့် Brentနှင့် WTIတို့တွင် မတူညီတဲ့ ဈေးနှုန်းများရှိရသနည်း?
၈၀ခုနှစ် အလယ်လောက်ထဲက WTI နှင့် Brentသည် တူညီတဲ့ဈျေးနှုန်းမှာ ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည်။ Brent ထက် WTIက ပိုဈေးကြီးသည့်အခါများလည်း ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိအရ၊ WTI သည် Brent ထက်ဈေးနိမ့်နေသည်။ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုသည် ဘာရယ်တစ်ခုလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀-ဒေါ်လာ ၂၀ကြားပြောင်းလဲနေပါသည်။
အများအားဖြင့် ဈေးနှုန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၏ ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။
Brent သည် ပင်လယ်နားမှ ထုတ်တာဖြစ်သဖြင့်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခသည် သိသိသာသာ နည်းပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ WTI သည် ကုန်းပတ်လည်ဝိုင်းရံလျှက်ရှိသော မြေနေရာများတွင် ထုတ်ယူရသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် မြောက်အမေရိက ထုတ်လုပ်မှုကို ဈေးကွက်အတွင်း ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ခက်ခဲစေနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ပြဿနာများနှင့် ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်သည် ပိုကြီးလာပါသည်။
အစောကပြောခဲ့သလို၊ Brent သည် WTI ထက်အရည်အသွေးနိမ့်သည်။ သို့သော်လည်း ရေနံရည်ညွှန်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး၊ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ တင်ပို့မှုများကြောင့် ပိုမြင့်မားတဲ့ ဈေးနှုန်းရှိပါသည်။
မြေပထဝီဝင် ပြဿနာအနေအထားသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အရေးကြီးသည့် အခြားတစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တင်းမာမှုများသည် ရေနံအပေါ်၊ အထူးသဖြင့် Brent အပေါ် ဖိအားဖြစ်စေသည်။ တင်းမာမှုများသည် ပံ့ပိုးမှုကျဆင်းမှုကို ဦးတည်စေသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခု၏ ထောက်ပံ့မှုကျဆင်းလာတဲ့အခါ၊ ဈေးတက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာ သင်သိထားသင့်ပါသည်။ အနောက်တက္ကဆက် အလယ်အလတ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသများတွင် အခြေခံထားသည့်အတွက် သက်ရောက်မှုနည်းပါးပါသည်။
WTI ဈေးနှုန်းသည် ရေနံစိမ်းသိုလှောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပမာဏတိုးလာလေ WTI ကျဆင်းလေဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုပမာဏ ကျဆင်းလေ၊ WTI မြင့်တက်လာသည်။ ဒီနေရာတွင် ပံ့ပိုးမှုပြဿနာအကြောင်းကို သိထားသင့်ပါသည်။ ပံ့ပိုးမှုအားကောင်းသည့်အခါ၊ ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသည်။
ထို့ကြောင့် သင်မြင်သည့်အတိုင်း အဓိက ရေနံရည်ညွှန်းအမှတ်များသည် မတူညီတဲ့ဖြစ်ရပ်များကြောင့် သက်ရောက်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့လမ်းကြောင်းသည် အများအားဖြင့် တူညီကြပါသည်။ Brent တက်လာလျှင် WTI သည် မြင့်မားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ ထိုးတက်သွားလိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်ရသော် Brent နှင့် WTI သည် စိတ်ချယုံကြည်ရသော ရေနံ ရည်ညွှန်းမှတ်များအဖြစ် ကျန်နေလိမ့်မည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ရေနံဈေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်လိုပါက၊ ယင်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကိုရွေးပါ။ သို့သော်လည်း၊ ရေနံရည်ညွှန်းမှတ်းများထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ယင်းဈေးနှုန်းများကို သက်ရောက်ကြောင်း အမှတ်ရထားပါ။ ဒီအတွက် အနာဂတ်ဈေးနှုန်းကို ပိုတိကျအောင် ခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အရောင်းအဝယ်သည် ပိုအမြတ်ရမှာဖြစ်သည်။